Mieritreritra ny hividy iPhone? Manaiky ny Google Pixel 4a ao amin'ny 5 i Apple ary ny Samsung Note 20 ho fifanakalozana | Vaovao IPhone
Fotoana vitsy lasa izay dia nanetsika ny programa fifanakalozana fitaovana i Apple, ny fahafaha-mitahiry vola ho antsika raha ny fahazoana ny maodely iPhone farany indrindra sy ny fanesorana ireo fitaovantsika taloha. Manaiky ny hamerenana ny fitaovana taloha i Apple ary mahazo fitaovana vaovao mora vidy kokoa izahay. Nanomboka nanaiky fitaovana izy ireos Apple ho an'ity fifanakalozana ity fa ankehitriny dia ataon'izy ireo amin'ny fitaovana Android ihany koa, ary ny tsara indrindra dia nanisy lisitra fotsiny izy ireo Google Pixel 5, 4a ary Galaxy Note 20...
Tokony holazaina fa amin'izao fotoana izao dia misy io fifanakalozana vaovao io any Etazonia, na dia azo antoka aza fa hahatratra ireo firenena hafa izay iasan'ny Apple amin'ny andro ho avy. Vaovao lehibe satria maro ny mpampiasa Android no mieritreritra ny hifindra amin'ny ekosistra Apple ary izao dia manana ny fahafahan'ny Apple hanome vola fanampiny hividianana iPhone vaovao. Ity ny lisitry ny fitaovana Android eken'ny Apple ho "varotra" hividy iPhone vaovao, araka ny ahitanao ireo fitaovana Android hafa koa dia voakasik'izany ary maro amin'izy ireo no nampihena ny vidin'ny Apple nividianany azy:
Samsung Galaxy S20 +: $ 305, $ 10 latsaka
Samsung Galaxy S20: $ 230, 10 $ latsaka
Samsung Galaxy S10 +: $ 250, $ 30 bebe kokoa
Samsung Galaxy S10: $ 180, 5 $ latsaka
Samsung Galaxy S10e: $ 190, miampy 45 $
Samsung Galaxy S9 +: $ 145, hatramin'ny $ 35
Samsung Galaxy S9: $ 125, $ 35 bebe kokoa
Samsung Galaxy S8 +: $ 100, $ 30 bebe kokoa
Samsung Galaxy S8: $ 80, hatramin'ny $ 25
Samsung Galaxy Note 10: $ 260, $ 10 latsaka
Samsung Galaxy Note 8: $ 75, $ 5 latsaka
Google Pixel 5: 350 $
Google Pixel 4 XL: 200 $, 20 $ ambany
Google Pixel 4: $ 170, 15 $ latsaka
Google Pixel 3 XL: $ 80, ahena 10 $
Google Pixel 3a: $ 70, hatramin'ny $ 20
Mazava ho azy fa vidiny eo ho eo ireo, amin'ny farany ny zava-drehetra miankina amin'ny satan'ny fitaovana izay atolotray ary afaka hahatratra ny vidiny ambony indrindra apetrak'i Apple hatrany izahay. Ary ianao Efa nisafidy ny hivarotra ny fitaovanao ao amin'ny Apple Store ve ianao? Mahita anao ve ity fifanakalozana ity amin'ny alàlan'ny Apple fa tsy mankany amin'ny tsena ivelany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Android » Mieritreritra ny hividy iPhone? Manaiky ny Google Pixel 4a ao amin'ny 5 i Apple ary ny Samsung Note 20 ho fifanakalozana
Ligia M Longsword Báez dia hoy izy:
Tsara izany ? Manana Phone 8 Plus aho ary te hanova azy ho an'ny Phy12 oh 11 Pro izay mety ho fiovana ho an'ny iray amin'izy ireo. Mety tolotra tsara ve ?? Misaotra tso-drano
Valiny tamin'i Ligia M Largaespada Báez
Tsy tolotra ratsy izany raha tsy te hanana olana amin'ny fivarotana amin'ny antoko fahatelo ianao, na dia marina aza fa any amin'ny magazay hafa dia afaka mahazo vola bebe kokoa ianao.
Gabriela acosta dia hoy izy:
Manana iPhone gb 6 gb aho ary te hanova azy
Valiny tamin'i Gabriela Acosta
Home premiere alohan'ny 11 Jona